Vavaka ho an'ny Virjiny ▷ ➡️ Mahita an-tserasera ▷ ➡️
Vavaka ho an'ny Virjiny
La vavaka amin'ny Virjiny Tsy isalasalana fa iray amin'ireo manandanja izy io ary iray amin'ireo izay ambara manerantany, koa eto ambany dia te-hizara aminao izahay, vavaka vitsivitsy izay hahafahanao manatona ny Virjiny sy hahazo fiadanam-po anaty, ary koa ny fitahiany sy ny fiarovany.
1 Vavaka ho an'ny Virjiny sy ny Virjiny eto amin'izao tontolo izao
2 Vavaka ho an'i Maria Virjiny
3 Vavaka ho an'ny Virjiny tsy misy kilema mba hositranina
4 Vavaka ho an'ny Virijin'i Guadalupe
5 Vavaka ho an'ny virijin'ny mpifindra monina
Vavaka ho an'ny Virjiny sy ny Virjiny eto amin'izao tontolo izao
I Maria Virjiny dia iray amin'ireo olona natokana indrindra tao el tontolo manontolo, noho izany dia namorona endrika na toetra tsy manam-paharoa tsy mitovy amin'ny tany am-boalohany, fa tsy mampihena ny maha-zava-dehibe ireo isa ireo. Ny fiantsoana sy fisehoana any amin'ny ankamaroan'ny firenena mandrafitra ny planeta, dia nahatonga ny fisian'ny mpivavaka na an'arivony an'arivony manokana, olona fito:
Virjin'i Guadalupe (Mexico): Virjiny iray mipoitra avy amin'ny fisehoana Marian lehibe, izay nahavita niteraka finoana sy fanoloran-tena marobe, nitantana ny fametrahana ity sary ity ho iray amin'ireo manan-danja indrindra sy malaza eto an-tany.
Virjin'i Fatima (Portugal): Nahita mpiandry ondry tanora telo izay vavolom-belona tamin'ny fanambarana nataon'ny Virjiny ho an'ny zanak'olombelona. Androany ny Toeram-piarovana ao Portiogaly, dia vavolon'ny olona fito tapitrisa mahery izay tonga mitsidika sy manome voninahitra azy.
Ny virijin'ny fiantrana varahina (Cuba): Olona tena manan-danja tokoa ho an'ny vahoaka kiobanina nanomboka tamin'ny 1.916 sy mpanjono an'arivony izay niankohoka teo aminy mba hiaro azy ireo amin'ny ranomasina avo ary mahalala azy ho "Cachita." Hatramin'ny nitokanan'ny Papa Benedict XV dia Papa maro be no afaka nitsidika azy ary nanasongadina ny maha-zava-dehibe an'io Virjiny io ho an'ny nosy Karaiba.
Ilay vadin'ny vadintsika masina (Puerto Rico): Ny 19 septambra dia maneho andro iray tena lehibe amin'ny kolotsaina Puerto Rico, satria nankalazaina hatramin'ny 1.969 tamin'ny andron'ny Providence Divine.
Virjiny Coromoto (Venezoelà): Araka ny angano izay misy momba ny fisehoan'ny Virjiny Maria amin'ny endrika hafa, ny Virjin'i Coromoto dia ekena eran'izao tontolo izao ho endrika voalohany natolotra an'i Cacique Coromoto sy ny vadiny, nangataka ny hanaovana batemy azy ireo hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra ... Androany, izy no olona hajaina indrindra ao Venezoela.
Virjin'i Lourdes (France): Fantatra amin'ny maha-Virjin'ny Grotto azy izy, satria niseho in-18 tao anaty grotto kely iray izay misy ny renirano Gave de Pau, eo ivelan'ny tanànan'i Lourdes, France.
Madonna Mainty ao Czestochowa (Polonina): Iray amin'ireo tarehimarika mararianina lava indrindra fantatra ankehitriny sy mahavita mahafantatra ny tenany manasongadina ny tantarany mahatalanjona sy ny fanoloran-tenan'i Papa John Paul II.
Vavaka ho an'i Maria Virjiny
Maria Virjiny, Reniko: satria miala izy el sol Ampio aho, amin'ny asa mafy isan'andro, ampio aho, raha miahanahana amin'ny fanapahan-kevitra raisiko aho, ampatanjaho aho ary hazavao, amin'ny toe-javatra mampidi-doza na misy karazana fakam-panahy, arovy aho, raha Milentika aho, vonjeo aho ary ento any an-danitra. Amena.
Vavaka ho an'ny Virjiny tsy misy kilema mba hositranina
Reny maloto, ianao izay niseho ho vadin'ny medaly mahagaga ary nangataka anao hangataka am-pahatokiana aminao mba hahazoanao ireo fitahianao lehibe.
Fantatray ny fangorahanao sy fanetren-tenao, rehefa avy nandinika ny fijalian'ny zanakao lahy sy ny fahafatesany ho anay. Amin'ny fahatsapanao fanaintainana dia lasa Reny izahay.
Reny Masina Indrindra, asehoy ahy ny fomba fahazoako ny fijaliana tahaka ny ataonao sy iaretanao ny fijaliana niainan'i Jesosy zanakao. Ny fitiavanao dia mampitony ny tahotro ary miteraka fahatokisan-tena bebe kokoa alohan'ny mpamindra fo.
Mifototra amin'ny drafitrao Andriamanitra ô, omeo ahy ny fanafody amin'ny aretiko. Miaro ny zanakao, handray ny hery Mila mandalo an'ity fotoan-tsarotra ity aho, rehefa mahazo ny voninahitrao sy ny famonjenao. Amena.
Ry Maria Virjiny, tahio aho ary mivavaha ho an'ny olona marary sy ho ahy.
Ny virijina masina indrindra any Guadalupe, mifototra amin'ny hafatrao, manompo anao aho amin'ny maha-renin'Andriamanitsika, izay misy antsika eto ankehitriny, ilay mpamorona lehibe an'izao tontolo izao sy namolavola ny tany sy ny lanitra.
Miondrika aminao sy ny sarinao mahagaga aho, miaraka amin'ny finoan'ny olona tsirairay izay mino anao ary mitady ny hidiranao an-tsehatra, mangataka aminao aho mba hanome ahy ahy ny fotoana ahafahako manohy miaina sy miaina ny fitahianao.
Mangataka aminao aho, Andriamatoa vadin'i Guadalupe, omeo ahy ny fangatahako mifototra amin'ny fanantenan'Andriamanitra, hanohy ho vavolom-pahasoavana, fiarovana, fitiavana ary fanampiana ho an'ny hafa. Aza adino ny momba ahy sy ny zavatra ilaiko, Amena.
Vavaka ho an'ny virijin'ny mpifindra monina
Ry Maria Virjiny, ianao izay miaraka isan'andro amin'ny mpiasa sy ny olona rehetra izay mitady ho avy vaovao eo amin'ireo lalan'izao tontolo izao. Ianareo izay mahalala ny momba ny sesitany dia diniho tsara ny momba anay ary atolory anay ny tso-dranonao sy ny olona tsirairay izay manampy anay, indrindra ireo izay voatery manaparitaka.
Ry renin'Andriamanitra, ampio ny kristianina tsirairay ary ampionony ny ory. Nanjary reny be fiahy sy be fitiavana ilain'ny olona maro izy rehefa mandao ny fianakaviany any an-tany hafa, mifindra monina any an-trano mba hiady ho an'ny tsirairay aminy ary matetika tsy manana olona mahatakatra ny alahelony sy ny toe-panahin'izy ireo.
Ampionony izy ireo amin'ny famindram-ponao sy ny fahatsapanao ny reny, arovy izy ireo amin'ny fifonanao amin'ny tsirairay amin'ireo mpifindra monina sy havana. Atolory azy ireo ny fanantenana, ny finoana ary ny fiantrana amin'ny diany lavitra, rehefa mihetsika eo ambanin'ny sitrakao masina izy ireo, mahatoky ny fiangonana sy Jesosy Kristy, Amena.
Raha nanampy anao hianatra bebe kokoa momba an'i Virjiny Maria ity lahatsoratra ity, ireo olona sarobidy indrindra aminy ary ireo vavaka sasany mandritra ny fotoan-tsarotra na loza, dia manasa anao izahay hamaky bebe kokoa momba ny Vavaka ho an'ny Virjin'i La Luz ary lahatsoratra maro hafa izay afaka miaraka aminao sy manamafy ny finoanao an 'Andriamanitra Tsitoha sy ny Reniny.
Vavaka ho an'ny namako
Vavaka Tompon'ny Fahagagana